Manchester United Oo Lambarrada Ka Beddelaysa Bruno Fernandes & Mason Greenwood
Saturday August 01, 2020 - 00:46:39 in Maqaallo by Editor Caynaba News
Manchester United ayaa isbeddel ku samaynaysay lambarrada ay xidhaan xiddigaheedu, gaar ahaan Bruno Fernandes
iyo Mason Greenwood, kuwaas oo xili ciyaareedka dambe kula bilaaban doona lambarro cusub oo ay dhabarka ku sitaa.
Taageereyaasha Manchester United ayaa kooxdooda usoo jeediyey inay ciyaartoy ka beddesho lambarrada ay xidhnaayeen fasal ciyaareedkan, isla markaana kuwo ka yar oo ay xiddigihii waaweynaa ee kooxdu xidhnaayeen loo geliyo.
Sida uu qoray wargeyska Manchester Evening News, United waxay u dhego nuglaan doontaa codsiga jamaahiirteeda, waxaanay labadan ciyaartoy heli doonaan lambarro cusub, kuwaas oo kulanka ugu horreeya xili ciyaareedka dambe ee Premier League ay arki doonaan iyagoo dhabarkooda uu ka muuqdo.
Warku wuxuu intaa ku daray in United ay No.7 u haynayso Jadon Sancho oo ka mid ah ciyaaryahannada uu Ole Gunnar Solskjaer doonayo inuu keeno Old Trafford, waxaana lambarkan hore u xidhan jiray Alexis Sanchez oo amaah ugu maqan Inter Milan, hase yeeshee la filayo in si rasmi ah loo iibin doono.
Haddii Sancho uu xagaagan iman waayo Old Trafford, isla markaana uu Sanchez si rasmi ah uga baxo kooxda, waxa uu No.7 sii ahaan doonaa mid bannaan oo aanay cidina xidhan doonin, laakiin waxa la buuxin doonaa labada lambar ee No.11 iyo No.8.
Bruno Fernandes oo waqtigan xidha No.18 iyo Greenwood oo No.26 kala xidhan ayaa laga beddelayaa lambarradan, waxaana loo guurinayaa No.8 oo uu Bruno Fernandes ka dhaxli doono Juan Mata oo xagaagan tegaya iyo Greenwood oo No.11 oo bannaan qaadan doona.
Wargeysku waxa kale oo uu tilmaamay in No.7 uu noqonayo mid meel u yaalla Jadon Sancho